New Year Celebrations in Yangon | Myanmar Business Today
Home Business Local New Year Celebrations in Yangon
New Year Celebrations in Yangon
The year 2019 will soon be left behind. Midnight on any other night can be just an ordinary hour, but midnight on December 31 brings fun and excitement. For fun-loving Myanmar people, the night of New Year’s Eve offers an opportunity to celebrate inavariety of ways.
We hold New Year celebrations as one year gives way to another. Then, three months later, we mark the start of New Year on traditional Myanmar calendar. For people who love going out and having fun, there are plenty of places to go for New Year’s countdown in Yangon.
Let me share with you some of the countdown events around the city.
Road to 2020 Road to Waterboom New Year Countdown
This event featuring famous local singers will be held at Yangon Waterboom in Thaketa Township. You need to buyaticket to get in, and your ticket gives youachance to winaprize from the night’s lucky draw. The entertainment roster includes Wai La, Wana, Wai Gyi, Wyne Su Khaing Thein and Wyne Lay. You can use the event title to search for more detailed information on Facebook.
New Year’s Eve Dinner & Countdown Party
You can also find out more about this event on Facebook, including the list of DJs and singers, menu and lucky draw details.
The event, which charges an admission fee, will be held at Vintage Luxury Yacht Hotel. It offersafree flow of whiskey, vodka, wine and beer andabuffet along withacountdown party. There will also be games before the party begins. Entertainment will be provided by singers withamore mature fan base.
Celebrating New Year’s Eve at Inya Lake
Inya Lake is located between Pyay Road and Kabar Aye Pagoda Road. During festival season, there isalot of foot traffic on the bank of the lake as people come to hang out and enjoy themselves with beer or other alcoholic drinks. It isafun way to spend time and costs very little. However, you need to keep an eye out asaspontaneous brawl can sometimes break out and ruin your fun. And sometimes people shout “Happy New Year” but not in unison, because their watches are not synchronized. At the time we write this, we still don’t know which TV channel will televise the countdown.
This event with famous DJs is organized withayoung audience in mind. It will be held at Thuwanabumi Park, where most of the electronic dance music events in Yangon are held. You can buy tickets on Myanmar Premium Countdown’s official Facebook page. There will bealot of fireworks to get you inafestive and excited mood.
Myanmar Countdown 2020
Organized annually by the Forever Group at Myoma Ground, this countdown features famous singers, dancers and DJs. The 2019 edition drewacrowd of around 400,000 and was broadcast byalocal TV channel. The entertainment lineup is headlined by rock bands Big Bag and Idiots and solo acts including Misandi, Snare and Sai Sai Khan Hlaing. What is special about the event is that it is free.
No matter how you spend New Year’s Eve, the New Year will arrive on schedule. What matters is that you pass the New Year happily and safely. Myanmar Business Today wishes all our readersaHappy New Year.
နှစ်သစ်ကူးည သွားစရာ ရန်ကုန်ပွဲလမ်းများ
မကြာခင်မှာ ခရစ်နှစ် ၂၀၁၉ က ကျန်ခဲ့တော့မယ် ။ မွန်းတည့် ၁၂ နာရီရဲ့ စက္ကန့်ပိုင်းအပြောင်းအလဲလေးတိုင်းက တခြားနေ့ရက်တွေအတွက် သာမန်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ဒီဇင်ဘာ၃၁ ရက်နေ့တွေတိုင်းမှာတော့ ကွဲပြားလေ့ရှိတယ်လို့ ဆိုရမလိုပါပဲ ။ ပြက္ခဒိန်နှစ်ပြောင်းလဲ ရုံတင်မကတဲ့New Year ကြိုဆိုပွဲတွေက အပျော်အပါးမင်တဲ့ မြန်မာတွေအတွက်လည်း ပုံစံမျိုးစုံကျင်းပလာလေ့ ရှိကြပါတယ် ။
ခရစ်နှစ်အပြောင်းအလဲနှစ်သစ်ကိုကြိုဆိုကြသလို အဲဒီကြိုဆိုမှှုအပြီး သုံးလကျော်လောက် အကြာမှာဆိုလည်း သင်္ကြန်ကျတယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ မြန်မာရိုးရာနှစ်သစ်ကူးကိုကျင်းပလေ့ရှိကြပါတယ်။ လာမယ့် ၂၀၂၀ ကိုကြိုဆိုမယ့် ၂၀၁၉ ရဲ့နောက်ဆုံးည ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်မှာတော့ ရန်ကုန်တဝိုက်သွားစရာလည်ပတ်တွေကတော့ အများသားပါ။ မိသားစုနဲ့အတူတူ အိမ်မှာစုဖွဲ့စားသောက်ရင်း အချိန်ကုန်ရတာကိုနှစ်သက်တဲ့ သူတွေရှိသလို မြို့ထဲတစ်ဝိုက်လျှောက်လည်ပြီးပွဲလမ်းတွေရှိရာ သွားရတာလည်း တချို့အတွက် ခုံမင်စရာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အပြင်မှာ အချိန်ကုန်လို့ရမယ့် New Year Countdown ပွဲတွေရှိတဲ့နေရာအချို့ကို ညွှန်းရရင်တော့ အတော်များတယ်ပဲဆိုရမယ်။ လက်လှမ်းမိသလောက် သွားလည်ပတ်လို့ကောင်းမယ့် ဒီဇင်ဘာ၃၁ ရက်မှာလုပ်မယ့်ပွဲအချို့ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။
နာမည်ကျော်တေးဆိုတွေပါဝင်တဲ့ ဒီပွဲက ရန်ကုန်တိုင်း သာကေတမြို့နယ်က Yangon Waterboom မှာ ကျင်းပသွားမှာပါ။ လက်မှတ်ဝယ်ပြီးပါဝင်ဆင်နွှဲရမယ့် ဒီပွဲအတွက် လာတဲ့သူတွေကို ကံစမ်းမဲတွေပေးမယ်ဆိုပြီး ကြေညာထားတာလည်းတွေ့ရသလို ၊ ကန်ရေပြင်နဲ့ ဖျော်ဖြေပွဲနဲ့ ကြည့်ငေးရင်း ၂၀၂၀ ကို ကြိုဆိုတာကလည်း တနည်းတဖုံကွဲကွဲပြားပြားရှိစေမှာပါ။ ဝေလ၊ ဝန၊ ဝေကြီး၊ ဝိုင်းဆုခိုင်သိန်း၊ ဝိုင်းလေး စတဲ့ တေးသံရှင်တွေပါမယ်လို့ ပွဲနဲ့ဆိုင်တဲ့ Event မှာဖော်ပြထားပြီးတော့ လက်မှတ်ဝယ်လို့ရမယ့်နေရာတွေပွဲနဲ့ဆိုင်တဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကို ပွဲခေါင်းစဉ်နဲ့ပေးထားတဲ့ Event မှာရှာနိုင်ပါတယ်။
ဒီလိုနာမည်နဲ့ပဲ Facebook မှာရှာရင်ကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဆိုမယ့်အဆိုတော်တွေနာမည်အပြည့်အစုံ ပါမယ့်ဒီဂျေတွေနဲ့ ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်တွေ နဲ့ အကျွေးအမွေးတွေကအကြောင်း ထည့်ပြောထားပါတယ်။
လက်မှတ်နဲ့ပေးဝင်ရတဲ့ဒီပွဲကိုတော့ ရန်ကုန်မြို့ဗိုလ်တထောင်ဆိပ်ကမ်းကVintage LuxuryYacht Hotel မှာလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Free flow of Whisky , Volka, Wine နဲ့ Beer လို့ထည့်ထားသလို ၊ Buffet time ၊
Countdown party ဆိုပြီးသတ်မှတ်ပေးထားသလို countdown မလုပ်ခင်မှာ Game အစီအစဉ်တွေလည်းထည့်ထားတာကြောင့် ည၁၂ နာရီအထိ အစီအစဉ်တွေပြင်ထားပုံရပါတယ်။ ပွဲကိုလာဆိုမယ့် အဆိုတော်တွေဟာ တေးဆို စိုးပိုင်၊ ဂျေညီညီ လို အရင်ကနာမည်သူတွေကို ထည့်ထားတာကြောင့် နယူးရီးယားကို အိမ်မှာမကုန်ဆုံးချင်တဲ့ သက်ကြီးပိုင်းတွေအတွက်လည်း အဆင်ပြေစေမယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့အင်းလျားကန်ဟာ ပြည်လမ်းနဲ့ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းအကြားမှာရှိပါတယ်။ လူအသွားအလာများတဲ့နေရာမှာရှိတတ်တဲ့ အင်းလျားကန်ရဲ့ ကန်ဘောင်ဘက်နှစ်ခုလုံးက အဲဒီလိုပွဲတော်ရက်မျိုးဆို နှစ်သစ်ကြိုဆိုသူတွေနဲ့ ကန်နှစ်ဘက်လုံးကပြည့်နေတတ်ပါတယ်။ ကန်ဘောင်မျက်ခင်ပြင်မှာ ကိုယ့်အစုအဖွဲ့လိုက် ဝိုင်းဖွဲ့စားသောက်ရင်းအချိန်ကုန်ရတာလည်း ငွေသက်သာပြီး ဘဝအမောပြေပျောက်စရာပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း အသောက်အစားအလွန်ကြူးဖြစ်တာမျိုးနဲ့ ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမှှုမျိုးကို လုံးဝရှောင်ကြဉ်ဖို့တော့ လိုပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တော့ သမိုင်းဝင်အင်းလျားမှာသူငယ်ချင်းတွေစုဖွဲ့ပြီးပျော်ရတဲ့အပျော်လေးက
ပျက်သွားနိုင်ပါတယ်။ လူထုအကြား ခင်မင်ရသူတွေနဲ့ အတူတကွနယူးရီးယားလို့အော်ဟစ်ရတာ ခုံမင်စရာပါ။ ဒါပေမယ့် Countdown အချိန်ရောက်ဖို့နီးလာလေ ဝိုင်းဖွဲ့ကြတဲ့ အဖွဲ့အလိုက် မတူညီတဲ့ နာရီတွေကအလန်းပေးထားသလို တစ်ဖွဲ့နဲ့ တစ်ဖွဲ့ Happy New Year လို့ထ ထ အော်ကြတဲ့ အဖြစ်အပျက်ကတော့ ခဏခဏဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ TV Channel တစ်ခုခုက ဦးဆောင်ပြီး အင်းလျားကန်တဝိုက်ဖျော်ဖြေရေးလုပ်မယ် မလုပ်ဘူးဆိုတာလည်း ဒီနှစ်အတွက် ဘယ်လိုလာမလဲ သေချာ မပြောတတ်သေးပါဘူး ။
ဒီပွဲမှာတော့ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး DJ တွေပါဝင်သလို လူငယ်ပရိတ်သတ်ကိုဦးစားပေးထားတဲ့ Countdown ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့ သုဝဏ္ဏဘူမိ Park မှာ ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ ။ဒီနေရာမှာ လုပ်တဲ့ပွဲတွေကို သွားဖူးသူတွေအတွက်တော့ ဒီPark မှာ လုပ်တဲ့ EDM ပွဲတွေက ဘယ်လောက်စည်ကားလဲဆိုတာသိမှာပါ။ Countdownကိုအမြဲတမ်းမနားတမ်း ကဲနိုင်ခုန်ပေါက်နိုင်မယ့် လူငယ်တွေ အတွက် ဒီနေရာကို ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ လက်မှတ်ကိုတော့ Myanmar Premium Countdown နာမည်နဲ့ တရားဝင် Page မှာဝယ်လို့ရတဲ့ နေရာနဲ့ဈေးတွေကို ရေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။ မီးပန်းတွေ တဖြောင်းဖြောင်းဖောက်ပြမယ့် နိုင်ငံတကာဆန်တဲ့ယဉ်ကျေးမှှုကို စီးမျောရသလိုဖြစ်မယ့် ပွဲမျိုးပါ။
ဒီပွဲကိုတော့ နှစ်စဉ် Forever Group က ကျင်းပနေကြဖြစ်ပြီး အရင်နှစ်တွေကတည်းက ရန်ကုန်မြို့ တပ်မတော်ခန်းမအနီးက မိုင်ဒါကွင်းမှာ ကျင်းပလာခဲ့တာပါ။ နာမည်ကျော်အဆိုတော်တွေ၊ Dancer တွေနဲ့ မြူးကြွစေမယ့် DJ တွေရှိတာကြောင့် ပွဲကနှစ်စဉ်စည်ကားတဲ့ ပွဲမျိုးပါ။ ၂၀၁၉ Countdown တုန်းက ပရိတ်သတ်လေးသိန်းလောက်လာခဲ့တဲ့ ဒီပွဲကို TV Channel မှာ တိုက်ရိုက်လွှင့်လေ့ရှိပြီးတော့ ဒီနှစ်အတွက်ထွက်လာတဲ့ အဆိုတော် Lineup ကိုကြည့်လိုက်တော့ လူစည်ဦးမယ့်ပွဲမျိုးပါ။ ဖျော်ဖြေမယ့်စာရင်းမှာ Big Bag ၊ Idiot လို Rock Band တွေပါဝင်သလို ၊ မိစန္ဒီ ၊ Snareလို ၊ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်လို Hip Hop အဆိုရှင်တွေပါဝင်တာကြောင့် ဒီပွဲကမြိုင်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ဒီပွဲရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ Free Show လက်မှတ်ခပေးစရာမလိုတာပါ။
လာမယ့်တစ်ရက်ချင်း တစ်စက္ကန့်ချင်းကုန်ဆုံးကုန်ဆုံးရင်း နှစ်သစ်ကရောက်လာတော့မှာပါ ။ ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပဲ နှစ်သစ်ကူုးညကို ဖြတ်သန်းပါစေ ။ အချိန်တန်ရင်တော့ ဒီပြက္ခဒိန်အသစ်က ရောက်လာမှာပါပဲ။ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းကင်းဖြတ်သန်းနိုင်ဖို့ကသာ အဓိကပါ။ ကျွန်တော်တို့ဂျာနယ်ဝိုင်းတော်သားတွေ အနေနဲ့လည်း စာဖတ်သူမိဘပြည်သူများအားလုံး မကြာခင်ကျရောက်မယ့်နှစ်သစ်ကစပြီး ရည်မှန်းချက်အသစ်တွေ ၊ ပျော်ရွှင်စရာတွေ၊ စိတ်ကြည်လင် ကိုယ်ကျန်းမားခြင်း အစစ်အမှန်တွေအားလုံး ရဖို့အတွက်လည်း ဒီနေရာကပဲ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ချင်ပါရဲ့ ။ ဒီမျှသာ ။
Previous articleOoredoo, UNDP Partner on Climate Resilience Program for Farmers
Next articleUpper House Approves Proposal to Regulate Tissue-Culture Banana Industry